Imifanekiso yedijithali, iintlobo kunye neempawu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umfanekiso wedijithali uqukethe ukumelwa kabini-ntathu yomfanekiso osekwe kwi matrix yamanani, edla ngokubini, kunye nezo kunye noziro.
Izigqibo zomfanekiso wedijithali zinokuba njalo enamandla okanye emileyo kwaye ngokusekwe kulo mgaqo bahlulahlulwe babini:
1 Iindidi zemifanekiso yedijithali
1.1 Rasters imifanekiso yedijithali okanye i-bitmaps
1.2 Imifanekiso yeVector
2 Zithini iindlela zemibala?
2.1 Imowudi yeMonochrome
2.2 Imowudi engwevu
2.3 Imowudi yombala yesalathiso
2.4 Imowudi ye-HSB
2.5 Imowudi yeRGB
2.6 Imowudi ye-CMYK
3 Iindidi zoxinzelelo lomfanekiso wedijithali
Iindidi zemifanekiso yedijithali
Rasters imifanekiso yedijithali okanye i-bitmaps
I-pixel nganye eyenza umfanekiso unombala othile kunye nesisombululo esiphakamileyo okanye iipikseli ezingaphezulu abanazo, kokukhona kuya kuba ngcono ukuba nomgangatho womfanekiso.
Enye yeenkqubo ezisetyenziselwa ukuhlela imifanekiso yaziwa kakhulu Photoshop, ezineziphumo ezilungileyo kakhulu, nangona kunjalo, imifanekiso yeerasters xa ikhulisiwe ilahlekelwa bubukhali, ukusukela iinkqubo zokuhlela zithatha indawo yeepixels ezinye ezingeyonyani.
Olu hlobo lwemifanekiso yedijithali ihlala isetyenziswa kwi iiwebhusayithi ezibonakalayo, kwiifoto kunye neminye imifanekiso yedijithali kuba umgangatho kunye neenkcukacha abazibonelelayo zibalulekile.
Ngokuchasene ne- imifanekiso yedijithali yedijithali, ayenziwanga ngeepikseli, kodwa kunoko shiya iigrafiki zevector ezixhomekeke kumanqaku athile olawulo, enkosi kumxholo wazo weefomula zemathematics bayakwazi ukwenza iicurvature phakathi kwenye indawo ukuya kwenye kwaye xa kusetyenziswa inkqubo yokuhlela, ibala nje ifomula kwaye iguqule umfanekiso kwiimfuno zomsebenzisi.
Imifanekiso yeVector zisetyenziselwa ukuvelisa imifanekiso elula, ezinjengeelogo, izithuba zemigca, imilambo, imida kunye nezinye izinto ezintsonkothileyo ezenziweyo. Ezona nkqubo zisetyenzisiweyo ukwenza kunye nokuguqula imizobo zikwakhona Umzobo wobugcisa y Adobe Illustrator.
Zithini iindlela zemibala?
Umfanekiso wedijithali unokuba nefayile ye- imibala emininzi okanye hayi, oku kuyakuxhomekeka kuhlobo lomsebenzi wegraphic owufunayo.
Kukho iindlela ezininzi zemibala, ezona zibalulekileyo zi-RGB kunye ne-CMYK kwaye ezi zezinye zezona zibalulekileyo kwaye zisetyenziswe kwimifanekiso yedijithali:
Kuyabonakala kuba imifanekiso imnyama kwaye imhlophe kuphela.
Ukufikelela kwi-250 yee-shades ezimnyama, ezimhlophe kunye nezimvi zisetyenzisiwe.
Imowudi yombala yesalathiso
Ukufikelela kwimibala engama-256 kufezekiswa kwifayile enye emalunga ne-8 bits.
Ngale nto kukho ifayile ye- Iphalethi enemibala I-25-bit kwaye umbala ngamnye unombala wawo, ukuqaqamba, kunye nokugcwala kwawo.
Le yeyona isetyenziswa kwi-PC kunye nezikrini ezihambayo, yiyo Inxalenye yemibala emi-3 esisiseko, njengokubomvu, luhlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka kwaye kwezi kunokwenzeka ukumela nawuphi na umbala.
Ivela kwi ICyan, iMagenta, umbala omthubi noMnyama, Ukufezekisa kuphela imibala ebekwe kwibala elibonakalayo kwaye lisetyenziswa ikakhulu kule mifanekiso ifuna ukushicilelwa okulandelayo ukukhusela imibala ekutshintsheni nayo.
Kubalulekile ukukhumbula oko iinkqubo ezifana neFotohop vumela ukwenza utshintsho kwimifanekiso enokuba luncedo kakhulu xa uguqula imifanekiso kuzo zombini izikrini kunye nokuprinta.
Iindidi zoxinzelelo lomfanekiso wedijithali
Olu cinezelo lwenziwa ngenjongo yokunciphisa indawo ekuhlalwa kuyo yimifanekiso ethile kwaye kukho iintlobo ezimbini:
Ukulahleka: ngale nkqubo kuyenzeka cinezela umfanekiso ngaphandle kokuphulukana nayo nayiphi na into, nokuba incinci kangakanani, ngenzuzo yokuba kamva umfanekiso wokuqala ungafunyanwa ngaphandle kwengxaki
Ilahleko: umbono wokusebenzisa le nkqubo yoxinzelelo hlala kwindawo encinci kangangoko, Yenza umfanekiso ungabanzima kangako, kodwa ngelishwa oku kubangela ukuba iinxalenye zawo zilahleke, nangona ngamanye amaxesha oku kungabonakali.
Siza kukhankanya ngezantsi ezinye zeentlobo zeefomathi zemifanekiso yedijithali
Ifomathi yeJPG / JPEG
Ifomathi yokwandiswa komfanekiso we-Gif
Ifomati yomfanekiso PNG
Ifomathi yolwandiso lomfanekiso .tiff / .tif
Ifomathi yomfanekiso RAW
Ifomathi yomfanekiso BMP
Ifomathi yolwandiso lwefayile yomfanekiso .psd
Ezinye zezi fomathi vumela ukunyanzela imifanekiso kunye okanye ngaphandle kwelahleko Kwaye basebenzela iirasters kunye nemifanekiso yevector.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Imifanekiso yedijithali, iintlobo kunye neempawu